के प्रजग कोरियामा ‘परिवर्तन’ हुन्छ ? - Online Majdoor
केही पश्चिमा देशहरू प्रजग कोरियालाई अविकसित र उपेक्षित देशको रूपमा चित्रण गर्ने गर्छन् । उनीहरू प्रजग कोरियालाई ‘सबभन्दा एक्लो र बन्द मुलुक’ र ‘अधिनायकवादी सत्ता’ को बिल्ला लगाउँदै ‘त्यहाँ परिवर्तनको खाँचो रहेको’ मा जोड दिने गरेका छन् ।
के प्रजग कोरिया वास्तवमै गतिरोधी र सभ्य विश्वबाट उपेक्षित देश हो ?
वास्तविकता के हो भने प्रजग कोरिया त्यस्तो देश हो जहाँ हरेक कुरा हिजो र आज, बिहान र साँझ परिवर्तन भइरहेको हुन्छ ।
क्षेत्र, गहिराइ र गतिको आधारमा प्रजग कोरियामा हुने परिवर्तन र विकास संसारको कल्पनाभन्दा पर छ ।
एसोसियट प्रेसको प्योङयाङ व्युरोका एक जना पूर्वप्रमुखले प्रजग कोरियाले आफूलाई पारेको प्रभावबारे बोल्दै भने, “प्रजग कोरिया आश्चर्यजनक गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ ।”
प्रजग कोरियाको भ्रमण गर्ने केही विदेशीहरूले त्यो देश हरेक दिन बदलिरहेको अनुभव सुनाए ।
स्मार्ट लगानीकर्ता जिम रोगर्सले भने, “उत्तर कोरियाको परिवर्तन ध्यान दिन जरुरी छ । यदि सम्भव भए म आफ्नो सबै सम्पत्ति नै उत्तर कोरियामा लगानी गर्न चाहन्छु ।”
तैपनि पश्चिमाहरूले किन प्रजग कोरियामा ‘परिवर्तन’ को लागि जोड दिइरहेका छन् ?
त्यसको कारण वास्तवमा उनीहरू प्रजग कोरियामा परिवर्तन र विकास चाहँदैनन् । पश्चिमा देशहरू प्रजग कोरियालाई उसले अँगालेको विचारधारा र प्रणाली परिवर्तन गराउन चाहन्छन् ।
त्यसो भए के प्रजग कोरिया उनीहरूले चाहेजस्तो ‘परिवर्तन’ हुन्छ त ?
एकै शब्दमा उत्तर दिनुपर्छ, पश्चिमाहरूको यो चाहना एउटा जङ्गली सपनामात्र हो किनभने प्रजग कोरियाली सेना र जनता समाजवादी व्यवस्थालाई आफ्नो जीवन र आस्थाको हिस्सा मान्दछन् ।
प्रजग कोरियाले हिजो अङ्गीकार गरेजस्तो परिवर्तनलाई निरन्तरता दिनेछ । उसले आज पनि त्यस्तै परिवर्तनलाई अङ्गीकार गरेको छ । तर, त्यस्तो परिवर्तन सधैँ प्रजग कोरियाली जनताको चाहनाअनुसार भयो, हुँदै छ र हुनेछ । पश्चिमा देशहरूले देखाएको मूल्य मान्यतामा आधारित परिवर्तन प्रजग कोरियामा हुनसक्दैन ।
संरा अमेरिकी रक्षा सचिव तथा उत्तर कोरियासम्बन्धी नीतिका संयोजक पेरीले सन् १९९० दसकको अन्त्यतिर प्रजग कोरियाको भ्रमण गरेका थिए । उनी प्रजग कोरियाका धेरै स्थानमा पुगे र आफ्नो अनुभव लेखेका छन् । उनले आफ्नो अनुभवमा लेखेका छन्, “संरा अमेरिकाले सोचेजस्तै र चाहेजस्तो उत्तर कोरिया कहिल्यै पनि ध्वस्त हुनसक्दैन । त्यसकारण संरा अमेरिकाले प्रजग कोरिया ध्वस्त हुने अपेक्षा गर्नुहुन्न बरु उसलाई बराबरीमा राखेर सोच्नुपर्छ ।”
उनको विश्लेषण र मूल्याङ्कन सही थियो । उनले त्यसो लेखेको बीस वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । आज पनि प्रजग कोरिया संसारमा छँदै छ । अझ बढी समृद्ध र बलियो देशको रूपमा प्रजग कोरिया अघि बढिरहेको छ ।
कोरियाली जनताले समाजवादको अब्बलता कुनै पुस्तकबाट सिकेका होइनन् । उनीहरूले समाजवाद आफ्नो जीवन र वास्तविकताबाट सिकेका हुन् ।
प्रजग कोरियामा राज्यले कामदार जनतालाई निःशुल्क घर दिन्छ । घर बनाउन जनताले एक पैसा पनि खर्च गर्नुपर्दैन ।
यस्तो जनमुखी समाजवादी व्यवस्थामा बाँचेका जनताले आफू बाँचेको समाज, प्रणाली र सरकारलाई आफ्नो जीवन जत्तिकै माया गर्छन् र आफ्नो जीवन रहुञ्जेल यिनको रक्षाको निम्ति प्रतिबद्ध छन् ।
पश्चिमा देशहरूले चाहेको जस्तो ‘परिवर्तन’ प्रजग कोरियामा दसौँ वर्ष वा अझ सयौँ वर्षसम्म पनि सम्भावना छैन ।
बुद्धि र बल दुवै शक्तिसम्पन्न र विलक्षण क्षमता भएका प्रजग कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जङ उनले त्यो देशको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । प्रजग कोरियाली जनता नेता किमको वरपर एकमनका साथ सङ्गठित छन् ।
कोरियाली जनता एक दिन आफ्नो सुखका दिन आउनेमा ढुक्क छन् । आफ्नो सर्वोच्च नेताको नेतृत्वमा अघि बढेमात्र प्रजग कोरिया एउटा सभ्य समाजवादी देश हुनेमा उनीहरूको विश्वास छ ।
नेता किम जङ उन जब कुनै स्थलगत निरीक्षणमा जान्छन्, तब कोरियाली जनता टीभीसामु बसेर उनले त्यहाँ दिएका नीति निर्देशन सुन्छन् । धेरै जनता त भावुक भएर आँखाबाट आँसु झारिरहेका हुन्छन् । उनीहरूको आँखामा किम जङ उन आफ्नो देशलाई आफ्नै परिवारजस्तै मान्ने नेता हुनुहुन्छ । उहाँ पूरा ऊर्जा र आत्मविश्वासका साथ निर्देशनहरू दिनुहुन्छ ।
प्रजग कोरियाले आफ्नै शैलीको विकास र परिवर्तनको बाटो पछ्याइरहेको छ । यो परिवर्तनको बाटो सभ्य समाजवादी देशतिरको बाटो हो । जहाँ जनताको भावना र आदर्शलाई सर्वोपरि मानिन्छ ।
प्रजग कोरियाले आफ्नै शैलीको समाजवादको बाटो पछ्याउनेछ जहाँ नेता र जनता दृढतापूर्वक सङ्गठित हुने गर्छन्, जहाँ नेता र जनता दृढतापूर्वक सङ्गठित हुन्छन् । समाज स्थायी हुन्छ । विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोणबीच सत्ताको छिनाझम्टी हुन्न । राजनीतिक विकृति, सामाजिक अराजकता र उपद्रव हुँदैन ।
प्रजग कोरियामा कसैले पनि कुनै ‘परिवर्तन’ को अपेक्षा नगर्दा हुन्छ ।
कीर्तिपुरमा ‘पार्टी कार्यक्रम’ को अन्तरक्रिया